တူရကီ၏ပထမဦးဆုံးပြည်တွင်းလျှပ်စစ် Truck ကား: Anadolu Isuzu ကား NPR10 မူလစာမျက်နှာ | RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီတူရကီ၏ပထမဦးဆုံးပြည်တွင်းလျှပ်စစ် Truck ကား: Anadolu Isuzu ကား NPR10 House
တူရကီ၏ပထမဦးဆုံးပြည်တွင်းလျှပ်စစ် Truck ကား: Anadolu Isuzu ကား NPR10 House
03 / 10 / 2018 06 တူရကီ, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ဘီးစနစ်များ, တူရကီ
က NPR 10 eV အားလုံး R & D, ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှု Anadolu Isuzu ကားကဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ Aselsan နှင့်အတူ ပူးပေါင်း. သာလွန်နည်းပညာနှင့်အတူလျှပ်စစ်မော်တာ၏ရှေးခယျြမှုပေးနေစဉ်ကားရဲ့ဘက်ထရီAltınayနောက်တဖန်အသုံးပြုခဲ့သည်တူရကီအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ Aselsan လျှပ်စစ်မော်တာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့; အထူးဒီစီမံကိနျးအတှကျဖွံ့ဖြိုးပြီးထိန်းချုပ်ထားအမြဲတမ်းသံလိုက် synchronous လျှပ်စစ်မော်တာကထောက်ပံ့အဖြစ်အင်ဂျင်ကိုထိန်းချုပ်ယူနစ်, ပါဝါဖြန့်ဖြူးယူနစ်, ယာဉ်ထိန်းချုပ်ရေးယူနစ်နှင့်တစ်ဦး, DC / DC က converters အဖြစ်နှင့်အာဏာစနစ်များကို။ AC အ charger ကိုမှာ4နာရီကဲ့သို့ရေတိုကာလ၌လျင်မြန်စွာအားသွင်းနေစဉ်တွင်Altınayဘက်ထရီ, DC ကအချိန်တိုကာလအတွင်းလုံးဝအထူးပုခက်ဖြင့်တရားစွဲဆိုနိုင်ပါတယ်။
က NPR 10 EV နှစ်ခုအားပြန်သွင်းနိုင်ဘက်ထရီရှိခြင်းဟာတာဝန်ခံယူနစ်အတွက်အပြည့်အဝစွမ်းရည်မှာ4ဇ, TLC 30 မိနစ်နှင့်အတူ AC အ charger ကို။ တစ်ဦးချင်းစီအတွက်ဆဲလ်တွေအပါအဝင် 168 336 စုစုပေါင်းရဲ့ဆဲလ်တွေ။
Anadolu Isuzu ကားမျိုးစပ်ခြင်းနှင့်လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်များကိုပထမဦးဆုံးမော်ဒယ်နှင့်ဇာတိက NPR EV လျှပ်စစ်ထရပ်ကားဖြစ်သောပထမဦးဆုံး 100 10% ၏အကွာအဝေးအားဖြင့်အနာဂတ်ကာလ၌ကိုကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်,470 သန်းအမေရိကန်ဒေါ်လာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးလေ့လာမှုများအထူးအဖွဲ့ကဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။
မြို့ပြက NPR010 EV အားဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုအားအသစ်သောဖြေရှင်းချက်ပူဇော်မည်သည့်တူရကီ၏ပထမဦးဆုံးပြည်တွင်းလျှပ်စစ်ကုန်တင်ကားတစ်ဦးအပြည့်အဝတာဝန်ခံထံမှ 110 ကီလိုမီတာနှင့်အတူသွားနိုင်ပါတယ်။
လျှပ်စစ်မော်တာ EV နှင့်အတူက NPR 100 10 ရာခိုင်နှုန်း, စွမ်းရည်တင်ဆောင်လာသော 6.6 တန်ချိန် torque ၏ BG နှင့် 335 1500 nm, ကျယ်ဝန်းလေယာဉ်မြင့်မားတိမ်းနှင့်အတူမြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများအတွက်စံပြမော်တော်ယာဉ်ဖြစ်မယ့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်ပြသထားပါသည်။
အရင်းအမြစ်: ငါ www.ilhamipektas.co
Anadolu Isuzu ကားပြည်သူ့ပို့ဆောင်ရေးအေးဂျင့်များ၏အနာဂတ်မိတ်ဆက်
ပိုလန်ကနေ Novocit အသက်ရ Anadolu Isuzu ကား
Anadolu Isuzu ကား busxnumxbus ဘာလင်တရားမျှတသော Novocit ဘဝ midibus နှင့်အတူပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
Anadolu Isuzu ကားစတော့ဟုမ်းဆွီဒင် edited UITP တရားမျှတသောပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
လမ်းမကြီးထဲမှာ Anadolu Isuzu ကား Citiport မက်ဆီဒိုးနီးယား
တူရကီရဲ့ကားလျှပ်စစ် SUV ကားသူများဖြစ်ကြလိမ့်မည်
အဆိုပါလမ်းရထားချွတ်ရတဲ့ဖို့တူရကီ၏ပထမဦးဆုံးပြည်တွင်း silkworm Ray ကထုတ်လုပ်
တူရကီ၏ပထမဦးဆုံးပြည်တွင်းအနိမ့်အထပ်ရထားစနစ်ဒီဇိုင်း Tool ကို
တူရကီ၏ပထမဦးဆုံးပြည်တွင်းနှင့်အမျိုးသားမော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက် Bursa M ကနေရပ်လိပ်စာ?
frenetic Salihli ဘတ်စ်ကား Stop တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်